तिहारको तिथि विवाद : कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन किन ? - Kohalpur Trends
२८ कात्तिक, काठमाडौं । यो सालको भाइटीका मंसिर १ गते कि २ गते ? विवादले यतिबेला सांस्कृतिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ४ दिनमा सम्पन्न हुने गरी तिहारको तिथि तय गरेपछि काठमाडौंका नेवार समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसपछि यो विवाद अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सतहमा आएको छ ।
भाइटीकाको विवाद के हो ?
विवाद कसरी सुरु भयो ?
Previous Previous post: बाराको पचरौता १ का वडाध्यक्षको निधन
Next Next post: ९ वर्ष अघि बुहारी बनेर भित्रिएकी थिइन्, पेट दुखेर अस्पताल जाँदा खुल्यो उनी त पुरुष रैछन्, चिकित्सक पनि चकित्